Iimpawu Zakho ngokwakho Ukusebenzisa Ezi zilingo zovavanyo lweKhemistry
Uvavanye ulwazi lwakho ngeesampula iimviwo
Le ngqokelela yemibuzo yovavanyo lwekhemistry iqokelelwe ngokwemixholo. Umbuzo ngamnye uneempendulo ezinikezelwa ekupheleni kovavanyo. Ezi mvavanyo zinika ithuluzi lokufunda elisebenzayo kubafundi. Kwabaqeqeshi, banobutyebi obuhle kwimisebenzi yasekhaya, imibuzo okanye imibuzo yokuvavanya.
Amanani abalulekileyo kunye neScientific Notation
Imilinganiselo yinto ebalulekileyo kuyo yonke inzululwazi. Ukuchaneka kwakho kwenani elipheleleyo lifanelekileyo nje ngokulinganisa kwakho. Le mibuzo le-10 yokuhlolwa kwemveliso yechemistry ijongene nezihloko zamanqaku abalulekileyo kunye noqaphelo lwezesayensi . Kaninzi "
Ukuguqulwa ukusuka kwiyunithi enye yokulinganisa kwenye isisakhono esisisiseko sesayensi. Olu vavanyo lwemibuzo eyi-10 luquka ukuguqulwa kweeyunithi phakathi kweeyunithi zeetrikri kunye neeNgesi . Ukubhala ukusetyenziswa kweyunithi yokukhansela ukulula kalula iiyunithi kuyo nayiphi na ingxaki yesayensi. Kaninzi "
Ukuguquka kokushisa kukubala ngokuqhelekileyo kwikhemistry. Le ngqokelela yeemviwo ezili-10 zeemvavanyo zechematics ezijongene nokuguqulwa phakathi kweeyunithi zokushisa. Olu vavanyo lubalulekile kuba ukuguqulwa kwamaqondo okushisa kukubala kwi-chemistry. Kaninzi "
Ukufunda i-Meniscus - Ukulinganisa
Ubuncwane obalulekileyo obunobhoratri kwi-lab yekhemistri uyakwazi ukulinganisa ngokuchanekileyo umbane kwisiringi esiphelele. Le ngqokelela yeemviwo ezili-10 zeemvavanyo zechematics ezijongene nokufunda i-meniscus yamanzi. Khumbula ukuba i-meniscus yile ngqongqelo ibonwe phezulu kwinqwelo ephendula kwisitya sayo. Kaninzi "
Xa uceliwe ukubala ubuninzi, qiniseka ukuba impendulo yakho yokugqibela inikezwa kwiinqununu zobuninzi - igram, ii-ounces, iipounds okanye iikhilogram - ngevolumu nganye, njengama-cubic centimeters, ilitha, iigolons okanye i-milliliters. Elinye inxalenye enokukhohlisa kukuba unokucelwa ukuba unike impendulo kwiinqununu ezahlukeneyo kunezo anikwe zona. Ukuphonononga uvavanyo oluxhunywe kwisilayidi esinguNombolo 2 ukuba kufuneka uhlaziye kwiinguqu zokuguqulwa. Kaninzi "
Le ngqokelela yemibuzo yokuvavanya ihambelana nokuchongwa kwezinto ngokusekelwe kwifom ye - X A kunye nenani leeproton , i-neutron, kunye nee-elektroni ezidibene ne-atom ezahlukeneyo kunye ne-ion. Le yimibuzo ekhethiweyo ye-chemistry kwi-atom onokuyifumana kwi-intanethi okanye uprinte. Unokuba unqwenela ukuphonononga inkolelo ye-athomu ngaphambi kokuba uthathe le mibuzo. Kaninzi "
Ukubiza iIonic Compounds
Ukubiza izixhobo ze-ionic kubaluleke kakhulu kwi-chemistry. Le yimiqoqo ye-10 yemibuzo yokuhlola imveliso ye-chemistry ejongene nokuqamba i-ionic compounds kunye nokuchaza kwangaphambili i-formula yeekhemikhali ukusuka kwigama eliqingqiweyo. Khumbula ukuba iqela le-ionic liyakhiwe eyenziwa yi-ions ezidibaniseneyo kunye nemikhosi ye-electrostatic. Kaninzi "
I-mole i-unit ejwayelekile ye-SI esetyenziswa ngokuyinhloko ngekhemistri. Le ngqokelela yeemviwo ezili-10 zeemvavanyo zechematics ezijongene ne-mole. Itheyibhile yexesha eliza kuba luncedo ekukuncedeni ukugqiba le mibuzo. Kaninzi "
Ubunzima be- molar yenkunkuma bubunzima bomlenze omnye wenkunkuma. Le ngqokelela yeemviwo ezili-10 zokuhlolwa kweekhemikhali ibandakanya ukubala nokusebenzisa i-molar mass. Umzekelo we-mass mass may: GMM O 2 = 32.0 g okanye iKMM O 2 = 0.032 kg. Kaninzi "
Ukumisela ipesenti ezithinteleyo zezinto ezikwinqanaba liluncedo ekufumaneni iifom ephetheyo kunye namafomula amakhemikhali. Le ngqokelela yeemviwo ezili-10 zokuhlolwa kweekhemikhali ibandakanya ukubala ipesenti zeemali kunye nokufumana ifomula kunye nee-molecular. Xa uphendula le mibuzo, khumbula ukuba ubuninzi be-molecule ye-molecule bubunzima bonke bee-athomu ezenza i-molecule. Kaninzi "
Ifom yobumba yelinye iqela limelela inani elilula kakhulu kwinani eliphakathi kwezinto ezenza i-compound. Olu vavanyo lovavanyo lwemibuzo eyi-10 lujongene nokufumanisa amafomula amacandelo ezinkampani zamakhemikhali . Gcina ukhumbule ukuba ifom yobumba yoluhlu luyinkomfa ebonisa ubungakanani bezinto ezikhoyo kwikhampani kodwa kungekhona iinani zamathom efumaneka kwi-molecule. Kaninzi "
I-molecular form of a compound ibonisa inani kunye nelolu hlobo lwezinto ezikhoyo kwiyunithi yeeyunyuli zekomyunithi. Olu vavanyo lovavanyo lwemibuzo eyi-10 lujongene nokufumana i-molecular form of compounds. Qaphela ukuba ubuninzi be-molecule okanye ubunzima be-molecular bubunzima beqingqiweyo. Kaninzi "
Ukuveliswa kweemfundiso kunye nokuLungisa ukuLungisa
Izilinganiso zeStoichiometric zeemveliso kunye nemveliso yokuphendula ingasetyenziselwa ukuchonga isivuno semfundiso esabelayo. Ezi zidibaniso zingasetyenziselwa ukuchonga ukuba yeyiphi na ummangalisa oza kuba ngumlamli wokuqala oza kutshabalala. Lo mphendulayo ubizwa ngokuba yi-reagent. Le ngqokelela yemibuzo ye-10 yokuvavanya ibandakanya ukubala izivuno zemfundiso kunye nokuqulunqwa kweempembelelo zeemichiza. Kaninzi "
Olu vavanyo lwezithethe luqoqo lwemibuzo ekhethiweyo ye-10 ejongene nomgaqo weifomula zeekhemikhali. Izihloko ezifihliweyo ziquka iifomula ezilula kunye nee-molecular, ukwakheka kwepesenti kunye nokuqamba amagama. Ngaphambi kokuthatha uvavanyo lovavanyo, hlaziya ezi zihloko:
Indlela yokubala ipesenti eziphezulu
Ifomula yamagama kunye nefom
Ifomula elula kakhulu ukusuka kwingxaki yomzekelo weempompo
Mhlawumbi awuyi kufikelela kwikhemistry ngaphambi kokufuna ukulinganisela ukulingana kweekhemikhali. Imibuzo yemibuzo eyi-10 ivivinya amandla akho okulinganisela ukulingana kweekhemikhali ezisisiseko . Njalo qalisa ngokubonisa into nganye efunyenwe kwi -equation . Kaninzi "
Ukulinganisela ukulingana kweMikhali yeMichiza - No. 2
Ukukwazi ukulinganisela ukulingana kwamakhemikhali kubalulekile ngokwaneleyo ukuba uvavanyo lwesibini. Emva kwakho konke, ukulingana kweekhemikhali luhlobo lolwalamano oluya kuhlangana ngalo lonke usuku kwikhemistry. Olu vavanyo lwemibuzo-10 luqukethe ukulingana kwamakhemikhali amaninzi. Kaninzi "
Kukho iintlobo ezahlukahlukeneyo zempendulo zamakhemikhali . Kukho ukuphendula okukodwa kunye nokuphindaphindiweyo okuphindaphindiweyo, ukuphendula ukubola kunye nokuphendula kwangaphambili . Olu vavanyo luqulethe iimpendulo ezahlukeneyo zamakhemikhali ezili-10 ukuchonga. Kaninzi "
Ukugxininiswa kunye neNkcazo
Uxinzelelo ngumlinganiselo wenkunkuma kwisithuba esicacisiwe sendawo. Isilinganiselo esisiseko sokugxininisa kwi-chemistry yintlambo. Le ngqokelela yeemviwo ezili-10 zokuhlolwa kweekhemikhali ihambelana nomlinganiselo wokulinganisa . Kaninzi "
Kubalulekile ukuqonda ukulungiswa kwee-electron ezenza i-athomu. Isakhiwo sekhompyutheni sichaza ubukhulu, imilo kunye ne-valence yama-athomu. Ingasetyenziselwa ukuqikelela indlela ama-electron azakusebenzisana ngayo namanye ama-atom ukuba azinze amabhondi. Olu vavanyo lwekhemisthi lubandakanya iikhontrakthi zesakhiwo sekhompyutheni, i-electron orbitals kunye nenani lamanani. Kaninzi "
Umthetho weGesi ofanelekileyo
Umthetho ofanelekileyo wegesi ungasetyenziselwa ukuqikelela ukuziphatha kwezinto zangempela kwiimeko ezingekho kweqondo eliphantsi okanye ukunyanzeliswa okukhulu. Le ngqokelela yeemviwo ezili-10 zeemvavanyo zechematics zijongene nemigqaliselo evezwe yimithetho efanelekileyo yegesi . Umthetho weGesi oBulungileyo ulwalamano oluchazwe yi-equation:
apho iP ingcinezelo , V ivolumu , n iyona inani leelesi zegesi efanelekileyo , R iyinto efanelekileyo yegesi kunye neT ishushu . Kaninzi "
Ulungelelwano lwamaxesha onke
Umlinganiso wamachiza we-chemical reaction response (reversible reaction reaction) kwenzeka xa izinga lokuphendula kwangaphambili lilingana nesantya sokuphendula . Umlinganiselo wezinga eliphambili kwizinga eliphambene nalo libizwa ngokuba yi -constant equilibrium . Uvavanye ulwazi lwakho malunga nemigqaliselo yokulingana kunye nokusetyenziswa kwazo kulo mvavanyo oqhubekayo wokuhlola umbuzo o-10. Kaninzi "
Abaninzi beApps Distributors
Luciferian kunye neSathanaic Views of Christianity
Ngaba uLeonard wayengumhlaza?
Geometer Moths, Inchworms, kunye ne-Loopers: I-Family Geometridae